အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes အား ယနေ့ (၁၄:၃၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံပါသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးကိစ္စရပ်များ အထူးသဖြင့် ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆွေးနွေးကြပါသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး နှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ကြပါသည်။